Hal arrin oo saldhig u ah in Man United ay saxiixa Sancho ku garaacdo kooxaha kale – Gool FM
Hal arrin oo saldhig u ah in Man United ay saxiixa Sancho ku garaacdo kooxaha kale
(Manchester) 26 Mar 2020. Kooxda Manchester United ayaa hadda hooggaanka u heysa loollanka loogu jiro saxiixa laacibka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho xagaagan.
Man United ayaana heysata kalsoonida ugu badan ay ku dhammeystiri karaan saxiixa xiddiggan lagu qiimeeyo lacagta dhan 120 Milyan oo gini.
Kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League-ga ayaa si aad ah u baacsanaya laacibka qaranka Ingiriiska, xilli kooxdiisa Dortmund ay diyaar u tahay inay iibiso haddii ay qiimo sare ku hesho.
Sancho ayaa isaga tagay Manchester City, kuna biirray kooxda Jarmalka ka dhisan sanaddii 2017 xilligaas oo uu heshiiskiisu ku kacay 8 Milyan oo gini, hase ahaatee, tan iyo markaas, waxa uu laacibkan la imaanayay qaab ciyaareed il-qabad leh, waxaana loo arkaa da’ayarka ugu mustaqbalka wanaagsan jiilkiisa.
Liverpool iyo Chelsea oo lagu daray Barcelona iyo Real Madrid ayaa dhammaantood isku garbniya saxiixa 20-jirkan, taasoo sabab u noqotay inay yaraato fursadda ha koox loogu saadaalin karo saxiixiisa.
Hase ahaatee, naadiyada Premier League-ga ka ciyaara ee aan magacooda kor ku xusnay ayaa ka caga jiidaya qiimaha Dortmund ay dul dhigtay laacibkeeda, balse waxaa diyaar u ah saxiixiisa kooxda Man United oo noqon karta bar-dhammaadkiisa xiga.
Macallinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer iyo madaxweyne ku xigeenka naadigaas ee Ed Woodward ayaa go’aansan doona inay dhammeystiraan saxiixaan noqon doona midka ugu qaalisan taariikhda kooxda.
Hadda waxaa rikoorka saxiixa ugu qaalisan ee Red Devils heysta Paul Pogba kaasoo Juventus 2016 kaga soo dhaqaaqay 89 Milyan oo gini, balse kooxda Old Trafford ka dhisan ayaa diyaar u ah inay 120 Milyan oo gini ay ka bixiyaan Sancho xagaagan.